သတင်း - မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်ပစ္စည်းများ၏ ဘုံသဘော
(၁) သန့်စင်သော မဂ္ဂနီဆီယမ်ပိုလီခရစ်စတယ်များ၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောမှုသည် မမြင့်မားပါ။ထို့ကြောင့် သန့်စင်သော မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအဖြစ် တိုက်ရိုက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။မဂ္ဂနီဆီယမ်စစ်စစ်ကို အများအားဖြင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်နှင့် အခြားသတ္တုစပ်များကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။
(၂) မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသည် ၂၁ ရာစုတွင် အတိုးတက်ဆုံးနှင့် အသုံးချနိုင်သော အလားအလာရှိသည့် အစိမ်းရောင် အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းဖြစ်သည်။
မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီ၊ ဇင့်၊ ဇာကွန်နီယမ်၊ သောရီယမ် နှင့် အခြားသတ္တုများဖြင့် သတ္တုစပ်များ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။မဂ္ဂနီဆီယမ်စစ်စစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤသတ္တုစပ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး ကောင်းမွန်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များသည် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသော်လည်း မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲပြီး ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသော ဆဋ္ဌဂံပုံစံပြားများဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် လက်ရှိ wrought magnesium alloys ပမာဏသည် cast magnesium alloys များထက် များစွာသေးငယ်ပါသည်။မဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြင့် သတ္တုစပ်များ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့် ဇယားကွက်များတွင် ဒြပ်စင်များစွာ ရှိပါသည်။မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် သံ၊ ဘီရီလီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ဆိုဒီယမ် စသည်တို့သည် သတ္တုစပ်များ မဖွဲ့စည်းနိုင်ပါ။အသုံးချမဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်အား အားကောင်းစေသည့် ဒြပ်စင်များထဲတွင် ဒွိမဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များ၏ စက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုအရ သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များကို အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်-
1. ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အရာများမှာ- Al၊ Zn၊ Ag၊ Ce၊ Ga၊ Ni၊ Cu၊ Th။
2. ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ဒြပ်စင်များမှာ- Th၊ Ga၊ Zn၊ Ag၊ Ce၊ Ca၊ Al၊ Ni၊ Cu။
3. ခွန်အားများစွာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ တင်းမာမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အရာများ- Cd၊ Ti နှင့် Li။
4. ခွန်အားကို သိသိသာသာတိုးစေပြီး တောင့်တင်းမှုကို လျော့ကျစေသော ဒြပ်စင်များ- Sn, Pd, Bi, Sb.
မဂ္ဂနီဆီယမ်တွင် မဂ္ဂနီဆီယမ်ဒြပ်စင်များ၏ လွှမ်းမိုးမှု
B. MgO 0.1% ကျော်လွန်သောအခါ မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။
C နှင့် Na ၏ပါဝင်မှု 0.01% သို့မဟုတ် K ၏ပါဝင်မှု 0.03 ကျော်လွန်သောအခါ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ ဆန့်နိုင်အားနှင့် အခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများလည်း လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။
D. သို့သော် Na ပါဝင်မှု 0.07% နှင့် K ပါဝင်မှု 0.01% သို့ ရောက်ရှိသောအခါ မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ အစွမ်းသတ္တိ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်း၏ ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီသာ ဖြစ်သည်။
သန့်စင်သော မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း၏ချေးခံနိုင်ရည်သည် အလူမီနီယမ်နှင့် ညီမျှသည်။
1. မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းမက်ထရစ်သည် အနီးကပ်ထုပ်ပိုးထားသည့် ဆဋ္ဌဂံရာဇမတ်ကွက်ဖြစ်ပြီး မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် ပိုမိုတက်ကြွပြီး အောက်ဆိုဒ်ဖလင်သည် လျော့ရဲသောကြောင့် ၎င်း၏သတ္တုစပ်၊ ပလပ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။
2. သန့်စင်မြင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များ၏ ချေးခံနိုင်ရည်သည် အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များထက်ပင် သို့မဟုတ် နည်းပါးသည်။ထို့ကြောင့်၊ သန့်စင်သော မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များကို စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်လုပ်မှုသည် မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသုံးချမှုတွင် ဖြေရှင်းရမည့် အရေးတကြီးပြဿနာဖြစ်သည်။